(ရေကူး မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
သတ္တဝါတို့၏ အသက်ရှင်နေထိုင်မှုအတွက် ရေကူးခြင်းသည် ရေထဲ၌ ရှေ့သို့ ရွေ့လျားနိုင်ရန်အတွက် နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ရေကူးခြင်းသည် အသုံးဝင်မှုနှင့် အပန်းဖြေမှု နှစ်ခုစလုံးအတွက် လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ အခြေခံအသုံးဝင်မှုများမှာ အေးမြခြင်း၊ အသက်ရှုခြင်း၊ ငါးဖမ်းခြင်း၊ အပန်းဖြေခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခန်းနှင့် အားကစားလုပ်ခြင်း တို့ဖြစ်ကြသည်။
ရေကူးခြင်းအား ပျော်စရာတစ်ခုအဖြစ်လည်းကောင်း၊ လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ပြိုင်ပွဲတစ်ခုအဖြစ်လည်းကောင်း အသုံးချနိုင်ပါသည်။ ကျောင်းအချို့တွင် ရေကူးခြင်းအား ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အားကစားတစ်ခုအဖြစ်လည်းကောင်း၊ အပျော်အဖြစ်လည်းကောင်း စာမေးပွဲပြီးချိန် သို့မဟုတ် ခက်ခဲသော လေ့ကျင့်ခန်းများပြီးသည် ရက်သတ္တပတ်တွင် အားကစားရုံများ၌လည်းကောင်း အပြင်တွင်လည်းကောင် လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးကြသည်။.
ထိုအကျိုးထူးကို ယောကျာ်း၊ မိန်းမ၊ လူကြီး၊ လူငယ်မရွေး၊ ညီတူညီမျှ ခံစားနိုင်ကြပေသည်။ ထိုသို့ဆိုရာ၌ ရေကူးခြင်း အတတ်သည် လွန်စွာ လွယ်ကူသောကြောင့်မဟုတ်၊ နည်းလမ်းမှန်ကန်စွာ သင်ကြား လေ့ကျင့်လျှင် ခွန်အားဗလများစွာ သန်စွမ်းရန်မလိုဘဲ တတ်မြောက်နိုင်သောကြောင့် ဖြစ်လေသည်။
ကမ်းစပ်ရေတိမ်တွင် ကိုယ်ကို ဖော့ထားနိုင်ခြင်းနှင့် အသက်ရှူခြင်းတို့ကို လေ့ကျင့်ပြီးသောအခါ ခြေခတ်ခြင်း၊ လက်ယက်ခြင်းတို့ကို တစ်ဆင့်တက်၍ လေ့ကျင့်နိုင်ပြီ ဖြစ်၏။ ရေထဲတွင် ခြေခတ်ခြင်းကို လေ့ကျင့်ရန် အကောင်းဆုံးနည်းမှာ ကမ်းစပ်တွင် ကိုင်တွယ်စရာတန်းတစ်ခု ပြုလုပ်ထား၍ အလျားမှောက်ကာ ထိုတန်းကို တံတောင်ဆစ်ကွေးချ၍ လက်နှင့် ကိုင်ထားပြီးလျှင် ခြေထောက်များကို ဆန့်တန်းကာ အထက်အောက် တစ်ဖက်တစ်လှည့်စီ လှုပ်ရှားပုတ်ခတ်ပေးခြင်းပင် ဖြစ်၏။ထိုသို့ လေ့ကျင့်သောအခါ ခြေထောက်များ၏အနေအထားသည် ရေကူးသည့်အခါတွင်ရှိမည့် အနေအထားတိုင်း ဖြစ်နေရန်လိုပေသည်။ ထိုသို့ ရေထဲတွင် မှောက်လျက် ခြေခတ်တတ်လာသည့်အခါ လက်နှင့် တန်းကိုမကိုင်ဘဲ ရေကူးခြင်းကို စတင် လေ့ကျင့်နိုင်ပေသည်။ စတင်ကူးသည့်အခါ လက်နှစ်ချောင်းကို ရှေ့သို့ ဆန့်တန်းလျက် လက်ဖဝါးနှစ်ဘက်ကို ထိစေပြီးလျှင် လက်ချောင်းများကို စုထားရလေသည်။ ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကိုလည်း ဆန့်တန်း၍ ဖနောင့်နှစ်ခုကို ထိထားပြီးလျှင် ခြေဖျားများကို ဘေးဘက်သို့ အတန်ငယ် ကားနေစေရလေသည်။ ထိုနောက် ဆန့်ထားသော လက်နှစ်ချောင်းကို ခွဲကာ လက်ဖဝါးကို ဘေးသို့ လှည့်ပေး၍ နောက်ဘက်သို့ ပခုံးနှင့် တစ်ပြေး ညီညာလာသည့်တိုင်အောင် ယက်ပေးရလေသည်။ နောက်တစ်ကြိမ် ယက်ရန် လက်ဖဝါးနှစ်ဘက်ကို မျက်နှာ အောက်သို့ ပြန်၍ သိမ်းယူလိုက်သည့်အခါ ခြေထောက်များကို ဖနောင့်ချင်း ထိကပ်ထားရင်း ကွေးယူလိုက်ရလေသည်။ ထိုနောက်မှ တစ်ဖန်ဘေးဘက်သို့ ကန်ထုတ်ဆန့်တန်းလိုက်ပြီးလျှင် ချက်ခြင်းပြန်၍ စုပေးလိုက်ရလေသည်။ ဤနည်းမှာ ဖားကူးကူးနည်းပင် ဖြစ်၏။ ဖားကူးကူးနည်းဖြင့် ရေကူးတတ်လာသောအခါ အခြားကူးနည်းများကို အလွယ်တကူ သင်ယူ နိုင်ပေမည်။ ဖားကူးကူးနည်းအပြင် အခြားလွယ်ကူသော ရေကူး နည်းတို့မှာ ပက်လက်ဖားကူး ကူးနည်းနှင့် ဘေးတိုက် လက် ယက်ကူးနည်းများ ဖြစ်ကြသည်။ အမြန်ဆုံးနှင့် အသုံးအဝင် ဆုံးသော ရေကူးနည်းမှာ လက်ပစ်ကူးနည်း ဖြစ်လေသည်။ အထက်ဖော်ပြပါ ရေကူးနည်းများအပြင် လိပ်ပြာရေကူး နည်းဟူ၍လည်း ရှိသေးသည်။ ဤနည်းတွင် လက်များကို ရေထဲ၌ ရှေ့သို့ ဆန့်တန်း၍ မထုတ်တော့ဘဲ ရေပေါ်မှ ရှေ့သို့ ယူသွားရလေသည်။ ဤသို့ ပြုလုပ်နိုင်ရန် ရေကူးသူသည် သူ၏ကိုယ်အရှေ့ပိုင်းကို ရေပေါ်တွင် ပေါ်သွားအောင် ပြုလုပ် ရသည်။ လက်များကို ရှေ့သို့ယူသည့်အခါ၌ တစ်ခုနှင့်တစ်ခုကို ရှစ်လက်မ (စင်တီမီတာ ၂ဝ)ခန့် အကွာတွင် ရှိစေပြီးလျှင် ရေထဲသို့ ကျရောက်စေကာ အားစိုက်၍ တင်ပါးဆီးသို့ ကြွယူ ရလေသည်။
ရေကူးခြင်းနှင့် ဆက်သွယ်လျက်ရှိသော ကစားနည်းမှာ ဒိုင်ဗင်ခေါ် ရေထဲသို့ ဂျွမ်းပစ်ထိုးငုပ်ခြင်း ဖြစ်လေသည်။ ဂျွမ်းပစ်ထိုးငုပ်ခြင်းသည် ကျွမ်းကျင်မှုအတတ်တစ်ခု ဖြစ်သည့် အလျောက် ကျင်လျင်စွာ ကစားနိုင်ခြင်းမှာ အလေ့အကျင့်ပေါ် တွင်သာ တည်နေလေသည်။ ဂျွမ်းပစ်ထိုးငုပ်လိုက်သည့်အခါ ကိုယ်သည် ရေထဲသို့ ကျောက်ခဲတစ်လုံးကို မြေ|ာက်၍ ပစ်ချ လိုက်သည့်အတိုင်း ရှောကနဲ ကျသွားရန်လိုပေသည်။ လက် နှစ်ဘက်ကို ဦးခေါင်းထက်တွင် မြေ|ာက်၍ဆန့်တန်းထားပြီးလျှင် လက်ဖဝါးနှစ်ခုကို ယှဉ်ကာ လက်မချင်းထိအောင် ထားရလေ သည်။ လက်ဖဝါးနှစ်ခုကို ယှက်ကာ စုမထားရချေ။ ကိုယ်လုံး သည် ရေထဲသို့ ဝင်ရောက်သည့်အခါ ညင်သာစေရန် ကိုယ်ကို ဖြောင့်ထားပြီးလျှင် ခြေဦးများကိုလည်း နောက်ဘက်သို့ ဆန့် ထားရသည်။ကိုယ်လုံးထက်ဝက်ခန့်သည် ရေထဲသို့ ရောက်သွား သည့်အခါ လက်တို့ကို အထက်ဘက်သို့ ကော့ပေးလိုက်ရ သည်။ ယင်းမှာ ဦးခေါင်းကို ရေပြင်ပေါ်သို့ အမြန်ပေါ်ထွက် လာစေရန်အတွက် ဖြစ်၏။ ထိုအခါ အသက်ကို ဝအောင် ရှူနိုင်လေသည်။ အချို့တို့သည် ဂျွမ်းထိုးပြင်ပြားပေါ်မှနေ၍ ဂျွမ်းပစ်ထိုးငုပ်ကစားကြ၏။ အချို့မှာမူ လွန်စွာမြင့်မားသော နေရာမှ ဂျွမ်းပစ်ထိုး ငုပ်ကစားကြ၏။ အချိန်မှာမူ လွန်စွာ မြင့်မားသောနေရာမှ ဂျွမ်းသုံးလေးပတ် လည်စေလျက် ရေထဲသို့ ဂျွမ်းပစ်ထိုး ငုပ်ကစားကြလေသည်။ ဂျွမ်းပစ်ထိုး ငုပ်ကစားခြင်း တွင် တစ်ပတ်ဂျွမ်း၊ ဝက်အူရစ်ဂျွမ်း၊ ပျံလွှားဂျွမ်း၊ ငန်းဂျွမ်း အစရှိသဖြင့် ကစားနည်းအမျိုးမျိုး ရှိလေသည်။
↑ Kehm, G (2007). Olympic Swimming and Diving:Great Moments in Olympic History. The Rosen Publishing Group, 14. ISBN 1404209700။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ရေကူးခြင်း&oldid=510799" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၈ ဧပြီ ၂၀၂၀၊ ၀၇:၂၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။